Dhegaysiga Radiyow Hargaysa W/Q: Cali Cabdi Coomay
Thursday 12th April 2018 09:10:15 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Sare
Waa idaacaddii ugu horaysay ee adduunka Af-soomaali ku hadasha, waxaana tijaabadeeda la bilaabay sannadkii 1941. Magaceedii hore ee loogu wanqalay wuxuu ahaa RADHYOW KUDU, waxaana magacan laga beddelay sannadkii 1944, loona beddelay RADIYOW HARGAYSA. Xaaji Cabdi Ayuub ayaa ahaa ninkii ugu horeeyey ee ka hadla Radhyow Kudu ama Radhyow Hargaysa, waana ninkii ugu horeeyey ee ka hadlay idaacadda laanta af-soomaaliga ee BBC. Qolka keydka cajadalaha ee Radiyow Hargaysa 16 sannadood ayuu ka weyn yahay qolka keydka idaacadda BBC-da laanta af-soomaaliga. Barnmaamijyada ka baxa idaacadda Radhyow Hargaysa waa kuwa dheelitiran.Tix-raacu waa qoraallo aan hore uga diyaariyey warbaahinta Soomaalida.
Kor-u-qaadista Dhegaysiga Radiyow Hargaysa
Haddii la doonayo in kor loo qaado dhegaysiga idaacadda Radhyow Hargaysa, waxa fiican in laga xoreeyo labada idaacadood ee duullaanka ku ah dhegaysigeeda, eek ala ah BBC-Somali iyo VOA-Somali. Markaad u kuurgashid wakhtiyada ay reer Hargaysa aadka u dhegaysataan Radhyow Hargaysa, waxa kuu soo baxaya in ay tahay inta ay labadan idaacadood hawada ka maqan yihiin. Haddaba haddii la doonayo in kor loo qaado dhegaysiga Radhyow Hargaysa waa in la qaado laba tallaabo oo kala ah:
= in la joojiyo oo gebi ahaanba la laalo baahinaha kala ah, 1:30 duhurnimo ee VOA Somali iyo 2:00 duhurnimo ee BBC-Somali.
= in la laalo baahinaha kala ah, 4:00 galabnimo ee VOA Somali iyo 5:00 galabnimo ee BBC-Somali.
Labadan wakhti waa kuwa ugu dhegaysiga badan ee ay shacabka reer Soomaalilaan toos ula socdaan waxa ay idaacaduhu baahinayaan. Wakhtiyada kale waa la iska dayn karaa oo saamayntooda ayaa yar.
Cadowtooyada Labadan Idaacadood
BBC-Somali iyo VOA-Somali madaxdooda haddu waa niman ka siman nacaybka iyo colaadinta Soomaalilaan, waxa taasina markhaati cad u ah sida aanay isugu dheelitirin wararka, barnmaamijyada, doodaha iyo falanqaymaha ka baxaya labadan idaacadood ee ku saabsan Somaliland iyo Soomaaliya. Waxa la yidhi’ meyd waxa u dambeeyey kaa la sii sido’ BBC-Somali barnmaamijyadeedii ku saabsanaa heshiiskii DPWORLD Berbera, waxa ay saddex baahinood isku xigsiisay saddex qof oo arrinta Berbera falaqayn ku samaynayey oo dhamaantood ka soo horjeeday heshiiska. Waxa ay kala ahaayeen, Dr. Bur-saliid oo bare jaamacadeed ah, xubin ka tirsan ururka xasaradaha adduunka iyo nin la yidhaa Sakariye oo ahaa sharciyaqaan Maraykanka degnaa.
Midna muu taageersanayn heshiiska DPWORLD ee Berbera, taasina waa dheelitir la’aan cad oo badheedh ah. Haddiiba uu madaxweynaha Soomaaliya booqasho ku tago dibadda, waxa ay warkiisa u soo tebiyaan tallaabo tallaabo, halka haddiiba uu madaxweynaha Soomaalilaan booqasho ku tago dibadda ay wararkooda ku sheegeen markuu baxo oo keliya. Sidoo kale waxa labadan idaacadood ka buuxa suxufiyiin u dhashay Soomaaliya oo Soomaalilaan nacaybka ka sokow xittaa heer bilow ah aan ka aqoon gobollada Soomaalilaan, halka kuwa Soomaaliyana ay u abtiriyaan iyaga oo meelaha qaar buunbuuniya ileyn waa deegaankoodii ay ka yimaadeenne.
Dhawaan ayey suxufiyadda Caasha Cuud oo ka tirsan VOA Soomaali ku dhawaaqi kari weyday magaalada’ BADHAN’ ee Somaliland, waayo waxa ay ku hadashaa lahjada ay ku hadlaan reer Muqdisho oo ma karaan ama kuma dhawaaqi karaan erayga’ DH’ oo waxa ay adeegsadaan erayga’R’. Markaa magaca magaaladani wuxuu noqonayaa ‘BARAN’ oo micnihii iyo goobtii ayaa is-beddelaysa. Markii Af-soomaaliga la qorayey, ayaa la isku qabtay labada eray ee”R” iyo "dh” bal ka la isticmaalayo. Guddigii Af-soomaaliga ayaa labadan kooxood oo isku haystay labadan eray soo kala dhexgalay. Ka dib waxa la yidhi " waar kooxdan wadata "R” bal isticmaala eraygan oo waxaad tidhaahdaan "gabar” ka dib waxa la yidhi jamac ka dhiga, oo waxay noqotay "gabrro”. Ka dib waxa lagu yidhi gabrro waa cay dhinaca woqooyiga Soomaaliya (Somaliland-t maanta). Kuwii watay "dh” ayaa yidhi; "gabadh” ka dib waxa la yidhi jamac ka dhiga, waxay noqotay "gabdho.” Markaa waxa halkaasi lagaga adkaaday kuwii watay erayga "R” oo waxa la isla qaatay in erayga "dh” dhammaan warbaahintu isticmaasho.
Af-Soomaaliga Qalloocan ee ay Adeegsadaanlabadan idaacadood:
Afka Qalloocan Afka Toosan
Roobab ka dillaacay Soomaalilaan…………………………..Roobab ka curtay
Diyaarad raqdeedii…………………………………………… Diyaarad burburkeedii
Naagayaasha Nayroobi………………………………………Naagaha Nayroobi
Madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed………………… Madaxweynaha Soomaaliya
Shacab iyo dadweyne……………………………………….. Dadweynaha
Degmada Baliga_Dhiiga…………………………………….. Degmada Balay -dhiig
Hargab ayaa ku dhuftay……………………………………..Hargab ayaa ka dillaacay
30 ilmood………………………………………………………30 carruura
Beero dabar’go’ay…………………………………………….. Beero xaalufay
Markab quusay………………………………………………… Markab degay
Qaad cunayaalka……………………………………………. Qaad cunayaasha
Dad la weysan yahay………………………………………..Dad la waayey
Aan idiin ciyaaro……………………………………………..Aan idiin saaro
Kooxaha Badbaadiyaasha………………………………… Kooxaha gurmadka deg-dega
Diyaarad baadi ah…………………………………………..Diyaarad la la’yahay
[Daawo Toos:-] Wasiir Xukuumadii Siilanyo Ka Tirsan Oo Warbaahinta La Hadlay Iyo Kulankii Cali Khaliif, Iyo Faysal Cali
Idaacadda Wareegta Hargaysa Oo Ka Warramay Shaqooyinka Uu Bulshadda U Qabto Iyo Xiligii La Aasaasay Oo Uu Soo Bandhigay
Raysal Wasaaraha Dalka Itoobiya Oo Qorsheeyay Safar Qarsoodi Ah Oo Uu Isla Dalkiisa Ku Tegayo Iyo Qorshe Uu La Damacsan
CISBITAALKA QAAXA (TB da ) EE MAGAALADA HARGAYSA O QARKA U SAARAN INU XIDHMO
"Anigu Xasan Suldaanba Uma Aqoonsani, Faysal Iyo Cali Khaliifna Muuse Biixi Bay Matalaan" [Suldaan Cado-gude]
["Deeq Iyo Adduun Siisan Mayno Gobonimadayada"] Madaxweyne Biixi Oo Ka Hadlay Kulankii Faysal Cali Waraabe Iy